नेपाली ‘ज्वाई’ गोबिन्दासँग कती छ सम्पती ? सुन्दै परिन्छ चकित ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाली ‘ज्वाई’ गोबिन्दासँग कती छ सम्पती ? सुन्दै परिन्छ चकित !
विज्ञापन मार्फत सो आम्दानी गरेका हुन् । गोबिन्दाले ब्रान्ड एन्डोर्समेन्टले उनलाई यति धेरै सम्पत्तीको मालिक बनाएको हो
९० को दशकमा दर्शको मन मष्तिक्समा बस्न सफल अभिनेता गोबिन्दाको ब्यक्तिगत जिवन पनि निकै रोचक छ । उनी सामाजिक रुपमा मात्र धनि छैनन्, आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै सम्पन्नशाली छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
फिल्मी क्षेत्रमा ब्यस्त भएकै समय ९० को दशकमा उनको आम्दानीमा पनि उतार चढाव आएको थियो । फिल्म शोला और शबनम, राजा बाबू, कुली नम्बर वान, हिरो नम्बर वान, दिवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, बडे मियां–छोटे मियां, अनाडी नम्बर वान, जोडी नम्बर वानमा उनले निकै शसक्त अभिनय गरेका छन् ।
तीन दशक लामो करियरमा ५६ वर्षीय अभिनेताले ठूलो प्रशंसा हासिल गरे । उनले थुप्रै फिल्मको निर्माणसमेत गरिसकेका छन् ।